Innovative Technology Solutions miompana amin'ny tetikasa fampiroboroboana ny fahaiza-manao IT sy Professional amin'ny famolavolana sy ny orinasam-pampandrosoana. ITS miaraka amin'ny orinasa mpamokatra Software sy Hardware izay manome fiofanana sy vahaolana ho an'ireo orinasa lehibe sy madinika manerana ny Globe. ITS dia mpivarotra be mpitia ho an'ny MNC toy ny HP, EMC ary maro hafa noho ny nanomezan'ny Sekoly Fanofanana sy ny fametrahana ny fotodrafitrasa ilaina amin'ny fanofanana ao amin'ny faritra APAC / APJ. ITS dia fanta-daza amin'ny fanabeazana ny Innovation amin'ny fampiofanana sy ny fanatsarana hatrany amin'ny votoaty mifanentana amin'ny fanomezana azy ireo avy amin'ny mpampianatra tena tsara. ITS dia fantatra amin'ny maha-flexibilite azy amin'ny fampifanarahana ny votoatin'ny fampiofanana ary vonona ny hampiofana amin'ny fotoana rehetra.
Amin'ny sélénium epochs
20 Febroary 2017
22 Febroary 2017